Iyo Apple Watch ichakwanisa kuyera shuga yeropa uye doro uye BP IPhone nhau
Iyo Apple Watch ichakwanisa kuyera shuga yeropa uye doro uye BP
Toni Cortés | 03/05/2021 20:00 | Yakagadziridzwa ku 03/05/2021 20:04 | Apple Watch
Ndine chirwere cheshuga, uye sekutsvagisa kwandakaita pamusika, parizvino hapana mudziyo unokwanisa kuyera huwandu hweglucose muropa usina kusangana neganda kana neropa chairo. Ndizvozvo hapana tsono, hapana kana.
Saka ndakashamiswa kwazvo nenhau apo mukana wacho wakabuda nguva yadarika kuti Apple Watch iri kuuya inogona kuyera iyo huwandu hweshuga muropa. Ndakaita tsvakiridzo pamawebhusaiti ekurapa, uye zvinoita sekunge zvinogoneka. Kufambira mberi kwakawanda kuri kuitwa mumunda wefotometric yeropa kuongororwa, uye zvinoita sekunge basa rakadaro ratove nyore neyakareruka sensor sensor. Nhau huru, hapana mubvunzo.
Zvinotaridza kuti bhizimusi remuyedzo rinopedza kudzora huwandu hweshuga muropa mazuva ayo averengeka Parizvino, vanhu vane chirwere cheshuga kupota pasirese havana imwe sarudzo kunze kweku tibaye pamunwe uye kunyorova reagent neropa kuti uone huwandu hweshuga, kana kushandisa ma sensors akasvinwa muganda. Asi zvinoita sekunge zvinhu zviri kuzochinja.
Izvo zvidzidzo ropa photometric Ivo vari kuramba vachifambira mberi, uye zvinoita sekunge kuongorora nekuvhenekera kwechiedza mwenje yemamwe mafambiro muropa, inogona kuve inoenderana nehuremu hweshuga iyo irimo, pakati peimwe dhata nyowani yebhaometri.
1 Sarai tsono
2 Inogona kuiswa mune smartwatch kana bracelet
3 Pachave nemhando mbiri dze sensors
Glucometer dzazvino dzinoda donhwe reropa, asi izvi zvinogona kuchinja munguva pfupi iri kutevera.
Iyi tekinoroji yatove yepamusoro uye yave kuda kutengeswa. Izvi zvinoreva kuti senge chero yemoyo yekutarisa yekutengesa iyo inotengeswa pamusika, mukati menguva pfupi, chete «kuvhenekera»Chidimbu cheminwe ine mamwe maratidziro emwenje chaiwo, kunze kwezvino zviripo izvo zvinokuratidza kare kurovera uye mwero weoksijeni yeropa, ivo vachakuratidzawo mamwe mazinga ebiometric akadai seBP, zinga reshuga nedoro redoro muropa.
Nekudaro, tichitoziva izvi kumberi, hazvisi zvachose zvisina musoro kufunga kuti yakanzi optical sensor inogona kuiswa mune ramangwana mune Apple WatchNenzira imwecheteyo yatinotova neayo kumusana kwewachi iyo inoyera kupururudza, mwero weoxygen muropa, uye inobatsira ECG.
Inogona kuiswa mune smartwatch kana bracelet
Iyo Apple Watch yatove nema sensors sensors ayo anoyera kupomba uye padanho re okisijeni muropa.
Rockley mifananidzo ndiyo imwe yemakambani mashoma pasirese ayo akaisa ongororo yayo mukugadzira iyo inzwa inoshandisa iyo tekinoroji yakatsanangurwa pamusoro. Uye Apple iri shure kwayo.
Apple ndiyo Rockley Photonics 'mutengi mukuru, pamwe chete neSamsung, Zepp Health, LifeSignals Group uye Withings. Saka chirongwa ichi chakakomba.
Aripo maApple Watch sensors anoshandisa musanganiswa we infrared mwenje uye inoonekwa kuyera zvese kurova kwemoyo uye oxygen kuguta. Rockley iri kushanda pane mamwe maseru anonzwisisika ema sensors aya, ayo anogona kuyera iyo huwandu hweshugathe doro, and the kudzvinyirira kweropa. Little joke.
Kuti uite izvi, Rockley Photonics yakadzora a wemitambo desktop kune saizi yechip. Iyo miniaturized vhezheni inoderedza mashandiro uye saizi yekuvhura iyo inounganidza mwenje. Asi Rockley yakwanisa kunatsiridza zvakanyanya chiratidzo-kune-ruzha chiyero ichienzaniswa neyakazara-saizi muchina. Izvi zvinoita kuti data rishandisike kutora yakawanda ye biophysical uye biochemical mamaki.
Pachave nemhando mbiri dze sensors
Parizvino ari kusimukira mhando mbiri dzemaziso ekuona. Yekutanga iyo inokwanisa kuyera kurova kwemoyo, oxygen kugwamba, BP, hydration, uye tembiricha yemuviri.
Iyo "yepamusoro" modhi inozokwanisa kuyera ropa glucose, carbon monoxide, lactate nedoro level. hapana kana chinhu. Iyo kambani yakaona kuti chizvarwa chekutanga cheaya ma sensors nyowani "chinobatika" kune smartwatch ichavhurwa mu hafu yekutanga ya2022.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch ichakwanisa kuyera shuga yeropa uye doro uye BP
Kuo, dzokera kunochaja uye ino nguva neiyo mini mini
Apple inoburitsa iOS 14.5.1 kugadzirisa dambudziko neApp Tracking Transparency